Category Germany – Cayaaraha dunida
May 08 2016 Kooxda Fc Bayern München ee dalka Germany ayaa ku guuleeysatay horyaalka dalkaas ee Bundesliga markii 26-aad waxeeyna kooxdaan jabisay Iskoor cusub oo taariikh ahaan aan wali ka dhicin horyaalka Jarmalka . Fc Bayern München oo horyaalka Germany 85-dhibcood ku qaaday ayaa waxa ay noqotay naadiga kaliyah ee horyaalkaan qaada 4-jeer oo xiriir More...
24 04 2015 Taageerayaasha Barcelona ayaa si weyn u rajeynayay in ay ka fogaadaan in ay ku aadaan midkood Munich iyo Real wax ayna door badiyeen Juvnetus . Inkastoo aysan Juve ku aadin hadana waxa ay haystaan fursad More...
24 04 2015 Xidigii hore ee kooxda Barcelona ee Thiago Alcantara ayaa doonaya in ay Barcelona ku Guulaysato Champions Leaque-ga haddii ay kooxdiisa Bayern Munch Ku Guuldaraysato inay hanato horyaalka Yurub. Laba More...
23 04 2015 Sida ay qortay Daily Star kooxda Bayern Munich ayaa isha ku heysa saxiixa daafaca midig ee kooxda Chelsea iyo Xulka Qarank Serbia Branislav Ivanovic. Ivanovic ayaa ka mid ah xidigaha ugu muhiimsan kooxda More...
22 04 2015 Pep Guardiola ayaa u mahadceliyay ciyaaryahanadiisa xalay layaabka sameeyay waxaana uu sheegay iney diyaar u yihiin hadii ay isku soo aadaan kooxaha Spain ee Barcelona iyo Real Madrid. Iyago kulankii More...